भिन्तुुना युुवा क्लबको निःशुुल्क खाना खुुवाउने अभियान सम्पन्न - Safalnews- News Portal from Nepal in Nepali.
सफल न्युज द्वारा २०७८ असार ८ गते मंगलवार १५:४२ मा प्रकाशित
पोखरा /पोखरा ३ तेर्सापट्टीकोे भिन्तुना युवा क्लबको निःशुुल्क खाना खुुवाउने अभियान सम्पन्न भएको छ । सोमबार गण्डकी मेडिकल कलेज (जि.एम.सी.) मा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै अभियान सम्पन्न भएको जानकारी गराइएको छ । क्लबले विगत ११ दिन देखि जिएमसीमा बिहान बेलुुका खाना खुुवाउँदै आएको थियो । स्वास्थ्यकर्मी र कोभिड विरामीका लागि खानासँगै खाजाको समेत व्यवस्थापन गर्न क्लबसँगै सहकार्य गर्ने संस्थालाई अध्यक्ष राजन श्रेष्ठले धन्यवाद दिएका छन् ।